Firefox 78 dị ebe a, mara akụkọ ya na mgbanwe kachasị mkpa | Site na Linux
Firefox 78 dị ebe a, mara akụkọ ya na mgbanwe kachasị mkpa
Versiondị ọhụrụ na alaka ụlọ ọrụ A tọhapụrụ Firefox 78 ụbọchị ole na ole gara aga, yana mbipute mkpanaka nke Firefox 68.10 maka gam akporo. A na-ekewapụta Firefox 78 wepụtara dị ka ESR maka emelite mmelite kwa afọ.
Na mgbakwunye, emelitere na ụdị nke gara aga ESR 68.10.0 (Abụọ mmelite ndị ọzọ 68.11 na 68.12 na-atụ anya n'ọdịnihu).
1 Kedu ihe dị ọhụrụ na Firefox 78?
2 Kedu otu esi etinye ụdị Firefox 78 ọhụrụ na Linux?
Kedu ihe dị ọhụrụ na Firefox 78?
Otu n'ime ndị isi mgbanwe na-kwụpụta na na bụkwa ezigbo mma na bọtịnụ «Mmelite Firefox» nke agbakwunyere na Uninstaller, nke ọ ga-ekwe omume ịtọgharịa nhazi ahụ ma kpochapụ ihe mgbakwunye niile na-efughi data data ọ bụla.
A sị na nsogbu, ndị ọrụ na-anwakarị edozi ha reinstall na ihe nchọgharị. Ume bọtịnụ ga-ekwe ka iji nweta a mmetụta n’atufughi: ibe edokọbara, akụkọ ihe mere eme nchọgharị, okwuntughe echekwara, kuki, akwụkwọ ọkọwa okwu ejikọtara na data iji mejupụta fọm na akpaghị aka (mgbe ịpịrị bọtịnụ ahụ, emepụtara profaịlụ ọhụrụ yana kpụga ọdụ data akọwapụtara n’aka gị).
Mgbanwe ọzọ na Firefox 78 bụ nke ahụ a gbasaa peeji nke nwere akụkọ banyere ịdị irè nke usoro nchebe megide nsuso usoro, nkwenye nke nzere na njikwa nke okwuntughe.
Na mbipụta ọhụrụ ahụ, enwere ike ịlele ọnụọgụ na ojiji nke nzere ndị mebiri emebi, yana ịchọta ngbanye nke okwuntughe echekwara site na ọdụ data data njirimara.
N'aka nke ọzọ, anyị pụrụ ịchọta na taabụ e kwukwara na onodu menu nke ahụ na-egosi maka taabụ kagbuo mmechi nke otutu taabu, nakwa imechi taabụ n'aka nri nke ugbu a ma mechie taabụ niile belụsọ nke ugbu a.
Banyere ndị ọrụ Windows, ọhụrụ a version na-agbakwunye nkwalite na WebRender na Intel GPUs na mkpebi ihuenyo ọ bụla, na-enye gị ohere ịnweta mmụba dị ịrịba ama na nsụgharị ọsọ ọsọ ma belata ibu CPU. Iji manye nsonye na ihe gbasara: nhazi, gbanye ntọala "gfx.webrender.all" na "gfx.webrender.enabled" ma ọ bụ bido Firefox na gburugburu MOZ_WEBRENDER = 1 setịpụrụ.
Mgbanwe ọzọ na ụdị ọhụụ a bụ atụmatụ ịkwụsị ịkwado ihe nketa algorithms, ndị niile na-ewu ewu DHE dabeere na TLS bụ ndị nwere nkwarụ na ndabara na ụdị ọhụrụ a nke Firefox 78.
E wezụga nke ahụ nkwado maka usoro TLS 1.0 na TLS 1.1 dị ka ụdị a.
Iji nweta saịtị ndị ahụ site na ọwa nkwukọrịta echekwara, sava ahụ ga-enye nkwado maka opekata mpe TLS 1.2. Ihe kpatara ịjụ nkwado TLS 1.0 / 1.1 bụ enweghị nkwado maka ciphers nke oge a na ihe achọrọ iji kwado ndị na-eme ochie, nke a pụrụ ịtụkwasị obi na nke ugbu a na mmepe teknụzụ kọmputa.
Agbanyeghi na enwere ike weghachite ikike site na ịrụ ọrụ na nsụgharị TLS nke ochie site na ntọala security.tls.version.enable-deprecated = eziokwu ma ọ bụ iji bọtịnụ dị na peeji nke nwere mmejọ egosiri mgbe ịnweta saịtị ahụ na protocol dị n'elu.
Finalmente ọzọ nke mgbanwe ndị pụtara na Firefox 78 bụ ogo ọrụ na ndị na-agụ ihuenyo maka ndị na-adịghị ahụ ụzọ nke emelitere budata, gbakwunyere maka ndị ọrụ nwere migraine na epilepsy, mmetụta animation belatara, dị ka ịkọwapụta taabụ na ịgbasa ebe nyocha.
Kedu otu esi etinye ụdị Firefox 78 ọhụrụ na Linux?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Firefox 78 dị ebe a, mara akụkọ ya na mgbanwe kachasị mkpa
openSUSE Leap 15.2 dị ugbu a yana nkwado maka ụfọdụ AI
Baidu sonye na Network mepụtara mepere emepe wee nye nweta ikike dị iche iche